Kungenzeka yini ukuthenga emuva kwe-GOV backlinks?
Uma kuziwa emuva kwe-backlink ezinamandla kakhulu kumawebhusayithi kahulumeni kanye namakhasi ebhulogi, nansi into eyodwa okufanele uqonde kuqala nokuphambili. Into yukuthi awukwazi ngempela ukuthenga emuva kwe-GOV backlink, ungawuthola kuphela. Yingakho ngezansi ngizokukhombisa inqubo yokwamukela lezi backlink eziwusizo ngezindlela eziningana zokusetshenziswa-ezingokoqobo Ngisanda kuhlolwa kuwebhusayithi yami. Futhi lokho kungaba umsebenzi oqeda isikhathi, kufanele ngivume. Kodwa usufuna ukujabulela amandla azo amandla, akunjalo? Ngakho-ke, nansi indlela ongayithenga ngayo i-GOV backlinks - ukutshala isikhathi sakho kanye nemizamo kulokho okulandelayo: ukuphawula kubhulogi kahulumeni, ukubhala mayelana nesikhungo sikahulumeni noma eminye imizimba ehlobene, ukuxoxa nenhlangano noma ilungu lomphakathi, ukwakha ikhasi lezinsiza, kanye nokuqhafaza ngesibindi ukuze uthole izimpindelo ezifanelekile ngokubuyisela. Ngakho-ke, ake sihlole isimo ngasinye esingavumela usizo lokuthenga emuva kwe-GOV backlink - ukukhokha ngomsebenzi wakho ngalokho.
Ukubeka amazwana kumaBlogs kaHulumeni
Ukushiya amazwana ngamabhulogi we-GOV kungenye yezindlela ezivame kakhulu zokuthola ama-backlink kahulumeni. Njengomuntu ophawula kwenye indawo kwi-intanethi, noma kunjalo, lo msebenzi awuyona elula njengoba kungabonakala ekuqaleni. Into yukuthi isabelo sezingonyama kumawebhusayithi ahlobene asivunyelwe ukubeka amazwana, noma okungenani kunokwenzeka kakhulu ukunikeza kuphela okungezona okulandela emuva. Ngakho-ke, kuzodingeka uchithe isikhathi esiningi ukuthola abafanelekile ukuthola izixhumanisi zokuphawula. Lokho kungaba umsebenzi onzima kakhulu lapha.
Ukubhala mayelana neSikhungo noma Umzimba Ohlobene
Dweba okunye kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi - bhala isihloko esikhulu mayelana nesikhungo sikahulumeni noma umzimba wayo ohlobene. Ungase ubhale futhi ngombusazwe - uxoxisana nelungu le-ejensi, noma umthelela omkhulu womphakathi futhi kuyindlela efakazelwe-yokubamba ezinye izinkinga. Isibonelo, ukwakha isihloko se-niche noma ingxoxo ku-Energy Sector kungaba isinqumo esakhelwe kahle kulabo abakha izindlu ezisebenza kahle, izindlu, noma ababandakanyekile kunoma iyiphi enye imboni ehlangene nezihambelana kakhulu noma i-niche. Labo abasebenzisa, ngokwesibonelo, nge-chemistry noma ekhemisi bangathola ukulingana okuphelele noMzimba Wokuvikelwa Kwezemvelo, noma Izinhlangano Zokunakekelwa Kwezempilo eziphethwe nguhulumeni.
I-Agencying Interviewing noma iLungu loMphakathi
Njengendlela eyedlule, ukuxoxisana nomholi wezombangazwe noma abanye abathonya abahlobene naye kuyithuba elihle lokuthola ama-backlink izindawo zikahulumeni. Odinga lapha ukwazisa umuntu yaxoxa futhi konke ixazululwe kusengaphambili - ngaphambi kokuba uqale ukusebenza ngalolo isihloko esiyigugu esithi bagcina isixhumanisi emuva kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi. Ukusikisela: cabanga ukhetha noma yikuphi umthetho osanda kuhlongozwa okulindeleke ukuba uthinte iphrojekthi yakho noma ibhizinisi lakho ku-inthanethi kulo lonke.
Ukwakha ikhasi lezinsiza
Ngokuya niche, ukwakha ikhasi lezinsiza ngezinye izikhathi kungaba yisixazululo esihlakaniphile ngempela. Ngamanye amacala, isibonelo ngebhizinisi lendawo, cabanga ukudala amakhasi wezinsiza ukuze unikeze ulwazi oluwusizo ngomthetho wendawo noma imithethonqubo esemthethweni engasiza abasebenzisi bendawo. Futhi, cabanga ukufakwa ohlwini kwamakhasi athile asekhona kakade asekhona kakade anamawebhusayithi amaningi kahulumeni.
Ngempela, ukuzithobayo cishe kuyindlela eqinisekisiwe futhi eqinisekisiwe yokuthenga emuva kwe-GOV backlinks ezikhungweni zikahulumeni. Konke okudingayo ukuthola amaphuzu abuhlungu okubaluleka kokubaluleka kwamanje - futhi nje ukubiza ngokuqukethwe kwakho kanye nalokho abafuna ukukuzwa. Yiqiniso, kufanele ube nomuzwa wangempela weqiniso - futhi ukhuthaze okuqukethwe kwakho ngokuqhubekayo ngangokunokwenzeka Source .